COVID-19 wuxuu keenay dalxiiskii Slovenia inuu istaago bishii Abriil
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka » COVID-19 wuxuu keenay dalxiiskii Slovenia inuu istaago bishii Abriil
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Slovenia • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Sababta oo ah tallaabada dowladda Slovenia si looga hortago faafidda ah Covid-19 cudur, ma jiraan dalxiisayaal dalxiis u yimaada oo kaliya qiyaastii 11,000 oo habeennimo ah oo dalxiisyaal ah (99% ayaa ka yar Abriil 2019) ayaa laga diiwaan geliyay goobaha hoyga dalxiiska ee Slovenia Abriil 2020.
Bishii Abriil 2020 inta badan dalxiisyaashu habeenki waxay ku hoydaan barnaamijyo waxbarasho
Xarumaha hoyga dalxiiska ee duubay dalxiis habeenki la joogo bisha Abriil 2020 inta badan martida martida ee ku jirta isweydaarsiga ardayda caalamiga ah, kuwaas oo sii joogaya Slovenia muddo dheer.
16-kii Maarso 2020 Dowladdu waxay soo saartay Amarka ku-meel-gaarka ah ee Mamnuuca ku saabsan bixinta iyo iibinta alaabada iyo adeegyada ee Macaamiisha Jamhuuriyadda Slovenia. Xarumaha hoyga dalxiisayaasha ma diiwaangalin karaan soogalootiga cusub ee imanaya laga bilaabo taariikhdan ilaa 18 May, markaasoo ficilada looga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus-ka loo fududeeyay sidoo kale howlaha dalxiiska qaarkood.
Saddexda bilood ee ugu horreeya sannadka 2020, 47% ayaa ka yar dalxiisyada habeennimo jooga marka loo eego isla muddadaas 2019
Laga soo bilaabo Jannaayo illaa dhammaadka Abriil 2020 dalxiisayaashu waxay soo saareen wax ka yar 660,000 oo soogalooti ah (52% ayaa ka yar isla muddadaas isla sannadkaas 2019) iyo in ka badan 1.8 milyan oo habeennimo ah (47% ayaa ka yar isla muddadaas 2019).
Dalxiisayaasha gudaha waxay soo saareen ku dhowaad 259,000 oo soogalooti ah (44% waxay kayaryihiin rubucii hore ee sanadka 2019) iyo 777,000 oo habeenki lajoogo (39% ayaa kayar). Dalxiis shisheeye ayaa soo saaray ku dhowaad 402,000 oo soogalooti ah (56% wuu kayaryahay rubucii hore ee sanadka 2019) iyo kudhowaad 1.1 milyan oo habeenki lajoogo (51% kayar).